အပြုအမူစွဲလမ်းမှု - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု
အပြုအမူစွဲခြင်းအပါအ ၀ င်စွဲလမ်းမှုအားလုံးသည်တူညီသော neurocircuitry ကိုပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်တူညီသောယန္တရားများနှင့် neurochemicals များပြောင်းလဲခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အခြေခံဇီဝကမ္မနိယာမမှာမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အသစ်သောသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုမဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကသာမန် ဦး နှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချသည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း (နို့တိုက်သတ္တဝါများနှောင်ကြိုး / ချစ်ခြင်းတိုက်ခြင်း) နှင့်အရက်သောက်ခြင်းအတွက်ယန္တရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်သည် (yummy အစားအစာ၊ မိတ်လိုက်ရာသီ) ။
စွဲ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများ
သိပ္ပံပညာသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းတွင်ဖြစ်ပွားသကဲ့သို့တူညီသောစွဲလမ်းသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများစွာသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၊ (သီးခြားလေ့လာမှုများအတွက်အခြားကဏ္sectionsများကိုကြည့်ပါ။ ) အချက်တစ်ခုတည်းကြောင့်သာညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုကိုထူးခြားစေသည်။ ယနေ့အထိ၎င်းကိုသုတေသနပြုမှုအနည်းငယ်သာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနေသောအခြေအနေသည်ပြောင်းလဲနေပါသည်။
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 52 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 27 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများပါရှိသည်။ အဆိုပါ, fအဆိုပါစာရင်းထဲတွင် irst7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ယုံကြည်ချက်, သဘောထားနှင့်အပြုအမူထိခိုက် porn အသုံးပြုမှု? တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများအထဲက Check - လေ့လာမှု ၄၀ ကျော်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆများအပေါ်“ မညီမျှသောသဘောထားများ” နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် - ဤ 2016 Meta-analysis သည်ကနေဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချုပ်: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015.
ဦး နှောက်အာရုံကြောခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနောက်ကွယ်ရှိသိပ္ပံပညာကိုကြည့်လျှင်သူ၏ဟောပြောချက်ကိုဖတ်ပါ ခါးပန်း (အဆိုပါ လိင်ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း)၊ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ, Neuroplasticity, နှင့် ASAM နှင့် DSM ပတ်သ က်. : သဘာဝတရား၏တံဆိပ်ခေါင်းပြောင်းခြင်း။ "
(L) ပုံမှန်ရေခဲမုန့်-စားပျော်မွေ့၏လျော့ကျလာပြန်တွေ့ကြုံခံစား, နှင့် (2012) လျော်ကြေးပေးရန်အစဉ်အဆက်-ပိုကြီးဝေမျှရှာအံ့သောငှါ
အပြုအမူစွဲ၏ Neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ၏တစ်ဦးကလျာထားသောကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: သုတေသနအရေးပေါ်ဧရိယာ (2013)
စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ (2018) ကြောင့်ရောဂါအတွက်ဟန်ချက်ညီတရားဝင်မှု, utility ကိုနှင့်အများပြည်သူကျန်းမာရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား
စွဲဆေးပညာအမူအကျင့်စှဲ: ယန္တရားများကနေလက်တွေ့ကျတဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် (2016)
အမူအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲသူတို့ရဲ့တူညီမဟုတ်သူတို့ရဲ့ထပ်တူထပ်မျှ (2017) ကသတ်မှတ်ရပါမည်
compulsive ဝယ်အပြုအမူ: အခြားအပြုအမူစွဲနှင့်အတူလက်တွေ့နှိုင်းယှဉ် @
အယ်ဒီတာ့အာဘော်: အပြုအမူစွဲအတွက် Neurobiological ပတ်သ က်. (2019)
"သဘာဝ" (ရေနှင့်စားနပ်ရိက္ခာ) ဆုကြေး (2000) ပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်ကတော့နျူကလိယ Accumbens encoding ကင်းအတွက်သီးခြားဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Circuits ဒါကသက်သေအထောက်အထား
လောင်းကစားရောဂါနှင့်အခြားအပြုအမူစှဲ: အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ကုသမှု (2015)
DSM-5 (2014) ၏အခြေအနေတွင် non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ
ရှုထောင့်: အပြုအမူစွဲအရေးပါ, မာကု Potenza (2015)
အဆိုပါစှဲ၏ပျံ့နှံ့: အများစု၏ပြဿနာတစ်ခုသို့မဟုတ်လူနည်းစု? (2011)
အပြုအမူကိုလှုံ့ဆော်ရာတွင်“ လိုလားခြင်း” နှင့်“ ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း” ၏အခန်းကဏ္: များ - လောင်းကစားခြင်း၊ အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း (၂၀၁၆)
အမူအကျင့်စွဲနှင့်ဝေါဟာရကိုစွဲ (2013) ၏ကန့်သတ်ခြင်း၏အယူအဆ
သဘာဝများ၏အာရုံကြောသိပ္ပံကိုစှဲမူးယစ်ဆေးဝါးမှ (2002) သက်ဆိုင်ရာချီး
စွဲလမ်း၏အခြေအနေတွင်အဆိုပါ somatic အမှတ်အသားသီအိုရီ: ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပံ့ပိုးမှုများကို (2015)